6zọ njirimara isii nke Azụmaahịa Azụmaahịa | Martech Zone
N'otu oge, mgbe ị na-ekwu maka logos, onye nrụpụta ama ama ama ama ama ama IBM, UPS, Enron, Morningstar, Inc., Westinghouse, ABC, na NeXT kwuru nke a:
Akara anaghị ere ere, ọ na-egosipụta.
Iji bụrụ njirimara zuru oke na nke nnọchi anya maka akara gị, njirimara ọ bụla dị na njiri mara njirimara ga-adị ebe ahụ. Akụkụ ọ bụla ga-ekwupụta ihe gbasara akara gị. Dị ị họọrọ, agba ndị ị họọrọ, na mkpụrụ akwụkwọ ị họọrọ, ga-abụ akụkụ nke ịkọ akụkọ ọnụ na mkpirisi.
Iji mezuo nke a, anyị achọpụtawo njirimara isii nke na-eme ka mmebe ihe ngosi dị egwu, echefu echefu, yana metụtara akara gị.
1. Dị Mfe & Dị Iche
Ihe dị mfe bụ isi ihe dị na ya. Dị ka ụbụrụ mmadụ dị mgbagwoju anya, ọ na-ahọrọ ịdị mfe. Ternkpụrụ na ikwughachi ihe bụ ihe ha. Ebe ọ bụ na ọ na-eme ihe ọmụma na ọsọ ọsọ ọsọ, ọdịdị dị mfe anaghị eme ka ụbụrụ rụọ ọrụ siri ike. Ma n'ihi na ọ masịrị atụmatụ dị mfe nke ukwuu, ụbụrụ na-echeta ya n'ụzọ dị ịtụnanya nke ọma, nwere ike hazie ya ngwa ngwa, ma ghọta ya nke ọma.
Mepụta akara ngosi dị mfe siri ike karịa ịmepụta ihe dị mgbagwoju anya. Echiche gị kwesịrị ịdị ọcha ma na-anabata ngwa ngwa iji nweta echiche dị mfe. Chee echiche banyere Microsoft, Nike, na Target, wdg. Echiche ndị dị mfe, enweghị nkwado, na nnọchi anya zuru oke nke echiche dị n'azụ ụdị ahụ.
Ihe na-eme ka akara ngosi dị ire na-ebufe ụdị ahụ abụghị ọtụtụ ihe eji emepụta ya. Ọ bụ enweghị ya, ma nwee ikike ikwu otu ihe nke mere ka ọ bụrụ akara ngosi dị irè.
Zaheer Dodhia, Onye guzobere LogoDesign.net
Ọzọkwa, echiche gị dị mfe kwesịrị ịbụ ihe pụrụ iche. Ọ ga-abụrịrị nke ika ahụ na akara ahụ naanị. Mgbe ndị mmadụ lere ya anya, ha ekwesịghị iche ihe ọ bụla ma ọ bụghị akara gị.
Iji mepụta ụdị nhazi ahụ, nyocha gị kwesịrị ịbụ nke ọma. Mụta ihe ndị asọmpi gị mere ma zere ịmeghachi atụmatụ ha. Ọzọkwa, mụta ihe dị ka ị nwere ike ime gị ika. Ghọta ihe ọ bụ maka ya wee weta ya na kwaaji.
Akara Ngwaahịa Akara
2. Echiche Azụmaahịa Kwesịrị Ekwesị
Ọ bụla akara ngosi, agba, ma ọ bụ font nhọrọ ị na-eme mgbe ị na-emepụta akara ngosi, na-enyefe ozi. Dị triangle ahụ na-egosipụta ndu na ọchịchị; okirikiri oge na mkpokọta. Na agba, oroma na-eji obi ụtọ na-arụ ọrụ ma na-acha anụnụ anụnụ na-eme ka obi dị jụụ. Ihe ndị a na-agbanwe mgbe ị gbanwere ndò na hue. Yabụ, ịhọrọ ụdị atụmatụ iji gbakwunye na njirimara gị kwesịrị ịbụ usoro echebara echiche nke ọma.
Ka anyị kwuo, ịchọrọ ịmepụta akara ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ịchọrọ ịkọwapụta okike na onye ndu kama yana ụdị ụdị ọchị. Nwere ike ikpebi ekenye atụmatụ dị iche iche iji lekọta akara ngosi azụmahịa dị iche iche. Iji maa atụ, ụdịdị ad logo gị nwere ike igosipụta onye ọchịchị ebe nhọrọ akara gị nwere ike ịbụ maka imepụta ihe. Enwere ike iziga ihe na-atọ ọchị site na ịhọrọ agba gị, wdg.
Ihu ọma, mkpa ka ị nọgide na-maara ihe mere ị na-eme imewe nhọrọ ị na-eme na hụ na ha na onye ọ bụla na-agwa a pụrụ iche akụkụ nke ika.
3. Mkpa maka ụlọ ọrụ na ụdị
Gịnị nwere ike ịbụ a ezigbo logo design maka otu ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ ọdachi zuru oke maka ọzọ. Mgbe ị na-eke atụmatụ gị, chee maka ụlọ ọrụ akara gị. Họrọ nhọrọ imewe gị dị mkpa maka ụlọ ọrụ ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-emepụta akara injinia, jiri akara ngosi na akara akara arụ ọrụ. Ihe odide ziri ezi nke na-adighi ike, na nhọrọ agba nke na-anọpụ iche ma ọ bụ gosipụta mmetụta nke grittrit. Gị imewe echiche ga-abụ mkpa na ika àgwà ị na-aga. Nhọrọ imewe gị maka akara dị mfe na akara na-akpaghasị ga-adị iche.
4. Scalable N'ihi Mbọn
A logo imewe na-egosipụta na multiple ahịa nyiwe maka kacha ikpughe na nghọta dị irè. Site na obere oghere dị ka ngwa akara ngosi nke ngwa ahịa na oke oke dị ka bọọdụ mkpọsa obodo, akara ngosi gị nwere ike ịbụ ebe ọ bụla. Yabụ, mepụta imewe dị mfe ma doo anya na ndị mmadụ enweghị nsogbu ịchọpụta ma ọ bụ ghọta ya n'agbanyeghị nha ya ma ọ bụ ebe egosiri ya.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ kwesịrị ịbụ nke nwere ike ịbelata ma na-emeghachi omume. Ọ bụrụ na ị goro onye na-ese ihe nkiri maka akara ngosi akara gị, jụọ ha ka ha zitere gị faịlụ izizi mbụ ka ị nwee ike ịnweta nnwere onwe zuru oke iji bulie akara ngosi gị elu ma ọ bụ ala. Ọ bụrụ na ị na-enweta akara ngosi sitere na ọrụ onye na-eme ihe n'ịntanetị, jide n'aka na ịhọrọ ngwugwu ngwugwu nke na-enye gị faịlụ vector nke akara ngosi ahụ. Ọdịdị vektọ ahụ na-eme ka njirimara nke imewe ka ọ dị mma mgbe ị na-enyocha logo ahụ.
5. Vasatail N'ihi na ahịa
Akara akara ngosi dị ire kwesiri inwe ọdịiche. Ọ bụrụ n ’ịhọpụta atụmatụ ya ma ọ bụ gbanwee agba ya ma ọ bụ okirikiri nhọrọ ukwuu, ọ ka kwesịrị ịchekwa ụdị ya dị iche. Tụlee akara ngosi Apple ọzọ. Iji mee ememme nganga, akara ngosi ahụ na-egosipụta ụda ala ya na-emebu ma were agba agba egwurugwu. Ma ọdịdị nke akara ngosi apụl ka dị iche - yabụ anyị maara nke akara ọ bụ.
Mgbe ị na-emepụta akara ngosi, chee echiche ma atụmatụ dị iche iche nwere ike ịrụ ọrụ n'adabereghị ma ọ bụ mgbe ha gbanwere ebe. Akara dị iche iche na-enye gị ohere ịme ememme dị mkpa, na-egosi ihe dị mkpa, ma ọ bụ bụrụ akụkụ nke nnukwu mmegharị oge niile ka ị na-agbatị akara gị na ịhapụ ịhapụ njirimara gị.
Njirimara ụdị njirimara ejiri mara ọrụ ga-enwerịrị ụdị dị iche iche akara ngosi dịka akara ngosi naanị akara ngosi, nhọrọ oji na-acha ọcha na oji, nhọrọ otu agba, aha naanị aha, wdg.
6. Icheta Maka Ncheta Ka Mma
Mgbe a logo imewe dị mfe na iche na, ọ na-enwekwu cheta. Ihe dị mfe dị mfe na-eme ka ọ dị mfe nghọta mgbe ọdịdị dị iche na-enye anyị ihe pụrụ iche iji lekwasị anya. Mgbe ha gbakọtara, anyị na-ejedebe na imewe pụrụ iche nke dị mfe icheta. Niile ụdị logo a ma ama n'ụwa nwere àgwà a.
Creatmepụta echefu echefu adịghị mfe, mana ọ dị oke egwu. Chọghị ka akara njirimara gị tufuo onwe ya n’oké osimiri nke njirimara njirimara. Site na nguzozi nke agba, udi, mkpuru edemede, na udiri mara, meputa ihe omuma nke ga adigide n'uche ndi mmadu ogologo oge ha huru logo ahu. O kwesịrị inwe mmetụta na mbụ shẹtsọ nke mbụ.
Maka m, ọ bụ njirimara ndị isi isii ndị a ga-enwerịrị ebe a na njirimara akara iji mee ka ọ dị irè. Kedu ihe ọzọ ị ga-agbakwunye? Enweghị oge bụ ihe ọzọ magburu onwe ya nke na-eme ka akara ngosi gị dị mkpa maka afọ ndị na-abịa. Ma mgbe ị gbalịsiri ike imezu iwu isii a kachasị elu nke ezigbo njirimara logo, ọ ga-abụrịrị na ị meberela onyonyo na-adịghị agafe agafe.
Ya mere, tie mkpu na nkwupụta banyere atụmatụ nke ị chere kacha dị mkpa ma na-eme ka njirimara njirimara na-aga n'ihu.
Tags: apụl logoapụl mpako logologo azụmahịachepụta akaralogonjirimara njirimaralogo designlogosmicrosoftmicrosoft logonikelekwasịrị